यदि तपाईंसँग धेरै शरीर कपाल छ भने। कसरी तपाईं यसलाई स्थायी रूपमा हटाउन सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईंसँग धेरै शरीर कपाल छ भने। तपाईं यसलाई स्थायी रूपमा कसरी हटाउन सक्नुहुन्छ?
समय: 2019-10-25 हिट्स: 186
शरीरका कपालबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ भनेर धेरै तरिकाहरू छन् - शेभिंगदेखि वेक्सिंगदेखि लेजर आईपीएल कपाल हटाउने - तर प्राकृतिक विधिहरूको बारेमा के भन्न सकिन्छ? प्रकृतिमा फेला परेका केवल पदार्थहरू प्रयोग गरेर तपाईंको शरीरको कपालबाट छुटकारा पाउन के त्यहाँ कुनै उपायहरू छन्? कुनै लेजरहरू, कुनै कडा कपाल हटाउने क्रीमहरू, र निश्चित रूपमा रेजर जलाउने कुनै जोखिम छैन!
धन्यबाद, त्यहाँ केहि प्राकृतिक कपाल हटाउने विधिहरू काम गर्दछन्। यदि तपाईं कसरी राम्रोको लागि शरीरको कपालबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ भनेर जान्न चाहानुहुन्छ भने, सबै प्राकृतिक केश हटाउनका लागि केहि साधारण विधिहरू पत्ता लगाउनको लागि पढ्नुहोस्।
कसरी स्थायी रूपमा शरीरको कपालबाट छुटकारा पाउने: के "स्थायी" अवस्थित छ?
हामीले कपाल हटाउने विधिहरू हेर्नु अघि, हामीले कोठामा भएका केश हात्तीको बारेमा कुरा गर्नुपर्नेछ ...
धेरै व्यक्ति स्थायी कपाल हटाउने विधि खोज्दैछन्, जुन शरीरको कपाललाई एक पटक र सबैको लागि हटाउनेछ। तिनीहरू वेक्सिंग देखि इलेक्ट्रोलीसिस सम्म लेजर आईपीएल कपाल हटाउन सबै प्रयास, सबै ती pesky कपाल पछाडि बढ्नबाट रोक्न सबै प्रयास मा।
तर के त्यहाँ "स्थायी" जस्तो चीज छ? के यहाँ केशलाई पुन: हुर्काउनबाट रोक्न कुनै उपाय छ, वा यो सधैं अन्तमा फिर्ता आउनेछ?
सत्य समय: त्यहाँ केवल एक मात्र कपाल हटाउने विधि छ जुन स्थायी मानिन सकिन्छ। इलेक्ट्रोलिसिसले कपालको फुलहरू जलाउँदछ, तिनीहरूलाई यति क्षति पुर्‍याउँछ कि तपाईंको शरीर उनीहरूलाई मर्मत गर्न असक्षम छ। फोलिकल्स बिग्रिएको साथ, तिनीहरू नयाँ कपाल फुल्न सक्दैनन्।
यद्यपि इलेक्ट्रोलाइसिस पनि १००% स्थायी छैन। धेरै व्यक्तिहरू जसले यस प्रकारको कपाल हटाउने काम गर्छन्, केही वर्ष पछि शरीरको कपाल पुन: बढ्दै जान्छन्। इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा भएको १० वर्ष बितिसकेपछि कपालका कणहरूले कम्तिमा पनि शरीरको कपालको प्रतिशतको कम्तिमा प्रतिशत वृद्धि गरे। यो इलेक्ट्रोलाइसिस अघि जस्तो अन्धकार वा बाक्लो होइन, तर यो अझै देख्न सकिने छ।
लेजर आईपीएल कपाल हटाउने सामान्यतया एक बर्ष वा अधिक सम्म कार्य गर्दछ। प्रकाश किरणले कपालको फोलिकल्सलाई हानी गर्दछ, तर इलेक्ट्रोलाइसिसको हदसम्म गर्दैन। यसले वास्तवमै यो रोक्दा री-ग्रोथ रेटलाई सुस्त बनाउँछ। यसैले प्रत्येक वर्ष अनुगमन लेजर आईपीएल कपाल हटाउने उपचार प्राप्त गर्न सिफारिस गरिन्छ। यस तरिकाले, लेजरले फेरि कपाल जलाउँदछ।
अन्य कपाल हटाउने विधिहरू (वेक्सिंग, ट्वीजिंग, सेभिंग, चिनी, थ्रेडि,, आदि) को रूपमा, कपाल हटाउने जहाँसम्म लामो समय सम्म रहँदैन। आफ्नो खुट्टा मैन, र तपाईं एक महिना वा अधिक को लागी उचित कपाल पुन: वृद्धि देख्न सक्नुहुन्न। तपाईंको पछाडि वा काँधहरूमा म्याक्स गर्नुहोस्, र परिणामहरू केहि लामो समय सम्म रहन सक्दछ (यी क्षेत्रहरूमा कपालको स्पार्सिटीको कारणले)। जे होस्, अन्तमा, कपाल सधैं फिर्ता हुनुहुनेछ!
यो बुझ्नाले तपाईंलाई यो महसुस गर्न मद्दत गर्दछ कि "स्थायी" कपाल हटाउने जस्तो कुनै चीज छैन। व्यक्तिहरू कसरी शरीरको कपाल स्थायी रूपमा स्वाभाविक रूपमा छुटकारा पाउन खोजिरहेका छन् तिनीहरू निराश हुने छन्। तलका प्राकृतिक कपाल हटाउने विधिहरू अत्यन्त प्रभावकारी छन्, तर तिनीहरू स्थायी रूपमा केहि कसम गर्न सक्दैनन्!
कसरी प्राकृतिक कपाल बाट शरीरको कपालबाट छुटकारा पाउने
जब तपाईं "स्थायी रूपमा" शरीरको कपालबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न, तलका विधिहरू तपाईंको शरीरको कपाललाई नियन्त्रणमा राख्न साप्ताहिक / मासिक संघर्षमा मद्दतको लागि अत्यन्त प्रभावकारी हुनेछ। कुन उपायहरू उत्तम काम गर्दछ भनेर पत्ता लगाउन यी उपायहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्!
पप्या धेरै उष्णकटिबंधीय फल भन्दा बढी हो! यो भिटामिन र खनिजहरू, साथै प्यापेन भनिने एक विशिष्ट इन्जाइमले भरिएको छ। पपाइनले तपाईंको कपाल फोलिकल्स भाँच्न मद्दत गर्दछ, तपाईंको कपालको पुन: वृद्धि दर कम गर्दछ। न केवल यसले हाल follicles बाट टुसाएको कपालको साथ व्यवहार गर्दछ, तर यसले तपाईंको शरीरको कपाल फिर्ता ढिलाइ गर्न सक्छ।
पपीयाको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यो तपाईंको छालाको लागि अत्यधिक पौष्टिक छ, र यो अत्यधिक संवेदनशील छाला सहितको लागि पनि लागू गर्न सकिन्छ। यो एक सुन्दर एक्सफोलिटिंग पदार्थ हो जुन शरीरको कपालबाट छुटकारा पाउनेछ किनकि यसले तपाईंको छालालाई पोषण प्रदान गर्दछ। एक win-win को बारे मा कुरा गर्नुहोस्!
पपई उपचार # १:
यो उपचारको लागि तपाईलाई आवाश्यक पर्नेछ:
कच्चा हल्दीको जरा
एउटा चक्कुको प्रयोग गरेर, पपाई र सानो चौकोनीमा काट्नुहोस्। क्युबहरूलाई बाक्लो, रसीला पपीया पल्पमा मिलाउन काँटा प्रयोग गर्नुहोस्।
सबैभन्दा सानो प्वालहरू प्रयोग गरेर कच्चा हल्दीको जराको एक नक्कल आकारको टुक्रा ग्रेरेट गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई Zest-आकारका टुक्राहरू दिनेछ, जुन तपाईं पपीया लुगाहरूमा मिसिन सक्नुहुन्छ। हल्दी राम्रोसँग अवशोषित भएको निश्चित गर्न पल्प राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्, र अनावश्यक कपालको साथ शरीरको भागहरूमा टाँस्नुहोस्।
तपाईको छालामा पल्पलाई हल्का रूपमा मालिश गर्नुहोस्, र यसलाई २० मिनेटसम्म बस्न दिनुहोस्। एक पटक समय सकिसकेपछि, तपाईंको छालाबाट पल्पलाई तातो पानीले कुल्ला। तपाइँको छालाको पहेलोबाट यसको हल्का मात्रा हुन सक्छ (हल्दीको नतीजा), तर यसले केहि दिनमा फेर्नेछ।
यो एक हप्तामा एक वा दुई पटक दोहोर्याउनको लागि एक उपाय हो। एकचोटि शरीरको कपाल उज्यालो भएपछि, तपाईं दाह्री / मोम खौरन सक्नुहुन्छ। तपाईको छालालाई पुन: सुधारको लागि एक दिन दिनुहोस्, त्यसपछि मिश्रण फेरि लागू गर्नुहोस्। यसलाई नियमित रूपमा लागू गर्नुहोस्, र तपाइँ लामो समयको लागि वाक्सिंग वा शेभिंगको बारेमा चिन्ता लिनुहुन्न!
आधा कप पपीताको बाक्लो पल्पमा क्रश गर्नुहोस्, र आधा चम्मच प्रत्येक ग्राम आटा र हल्दी पाउडर मिक्स गर्नुहोस्। दुई टेबल स्पून सरसों तेल, चार चम्चा एलोभरा (जेल वा कच्चा), र पेपरमिन्ट तेलको एक थोपा थप्नुहोस्।
तपाईंको छालामा मिश्रण लागू गर्नुहोस्, र यसलाई सुक्नुहोस्। लगभग २० मिनेट पछि (१ sensitive संवेदनशील छालाका लागि १ for), यसलाई तातो पानीले कुल्ला। यसले तपाइँको शरीरको कपाललाई हल्का पार्न र कपालको फोलिकल्सलाई पुन: बढ्नबाट रोक्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको छाला सुख्खा भएपछि, सुख्खा कम गर्न र छालाको रक्षा गर्न प्राकृतिक मोइश्चराइजिंग क्रीम प्रयोग गर्नुहोस्।
हल्दी एक शक्तिशाली जरा हो जसले करी, सस र स्ट्युहरूमा स्वादिष्ट थप गर्दछ, तर यो एक शक्तिशाली एन्टिआक्सिडन्ट पनि छ जसलाई कर्क्यूमिन भनिन्छ। कर्कुमिनले सूजन कम गर्न, ब्याक्टेरियासँग लड्न, र तपाईंको छालालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। सबै भन्दा राम्रो, हल्दीले गम्भीर रूपमा कपालको विकासलाई कम गर्न सक्छ।
तपाईं या त कच्चा वा पाउडर फाराममा हल्दी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको शहरमा यसको उपलब्धतामा निर्भर गर्दछ। यदि स्थानीय सुपरमार्केटहरू यसलाई बोक्दैनन् भने, पाउडर वा कच्चा हल्दी फेला पार्न ओरिएन्टल फूड स्टोरहरूको खोजी गर्नुहोस्।
हल्दी उपचार # १:
एक बड़ा चमचा हल्दी पाउडरको बराबर मात्रामा चनेको पीठो मिक्स गर्नुहोस्, र राम्रोसँग मिलाउनुहोस्। तिलको तेलमा खसाल्नुहोस् जबसम्म तपाईंसँग बाक्लो पेस्ट हुँदैन। तपाइँको औंलाहरू प्रयोग गरेर, अनावश्यक शरीरको कपाल भएको क्षेत्रहरूमा टाँस्नुहोस्।
तातो पानी संग कुल्ला अघि मिश्रण सुक्खा र लगभग minutes० मिनेट को लागी बस्न दिनुहोस्। टाँस्न को लागी एक सफा स्क्रबिंग गति प्रयोग गर्नुहोस्, र केश को एक बिट आउनेछ। तपाईको शरीरको कपालसँग सम्झौता गर्न तपाई यो उपाय एक हप्तामा दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ!
यो उपायको लागि तपाईलाई आवाश्यक पर्नेछ
हल्दीको पिठो आकारको टुक्रालाई ग्रेन्ड वा पीस्नुहोस्, र केही चम्चा गुलाब पानीमा चलाउनुहोस्। तपाइँ बाक्लो पेस्ट चाहानुहुन्छ जुन तपाइँको छालामा सजीलै लागू गर्न सकिन्छ।
तपाईंको औंलाहरूले पेस्ट लागू गर्नुहोस्, तर केवल अनावश्यक कपाल भएको क्षेत्रहरूमा। यसलाई १ to देखि २० मिनेट बस्नुहोस् (तपाईंको छालाको संवेदनशीलता / ड्राईनेसमा निर्भर गर्दछ)। एक पटक समय सकिसकेपछि यसलाई तातो पानीले धुनुहोस्।
यो तपाइँको खुट्टा, पछाडि, हतियार, र कम घने, पातलो कपाल संग जहाँसुकैको लागि एक उत्तम उपचार हो। बाक्लो, मोटो कपालका लागि (जस्तै तपाईंको पबिक क्षेत्र वरिपरि), तपाईंले दही, जमिनको ओट्स, वा चामलको पीठो थप्न आवश्यक पर्दछ।
चिनी, कागती, र मह
के तपाईंले कहिल्यै याद गर्नुभयो कि कसरी चिसो गाढा र मोम जस्तै गरम हुन्छ। हामीसँग स्वादिष्ट कारमेल र टफी छ!
महसँगको चिनीको प्रयोग महँगो प्याराफिन मैनको स्वाभाविक विकल्प हुनसक्दछ धेरै स्पा र कपाल हटाउने क्लिनिकहरूले। थोरै कागती थपेमा कपाल को मसिनो मिल्छ, यसको दृश्यता कम हुन्छ। मह र चिनीको मिश्रणले बाक्लो मोम बनाउँदछ, जुन एकपटक लागू गरे पछि यसले तपाईंको छालालाई पोषण दिईन्छ, यसले तपाईंको कपालमा पनि छिटो पार्छ - यसलाई पक्रन सजिलो बनाउँदछ।
नोट: यसको कार्यक्षमता अधिकतम गर्न यस उपायको प्रयोग गर्नु भन्दा करीव १० दिन अघि तपाईको कपाललाई ट्रिम गर्नुहोस्।
अघिल्लो: आईपीएल लेजर कपाल हटाउने उपकरण घर मा - के त्यहाँ कुनै साइड इफेक्ट छन्?
अर्को: तपाइँ लेजर ipl कपाल हटाउनु अघि के जान्नु पर्छ